I-Danai House-2 Bedroom Apartment with View &Terrace - I-Airbnb
I-Danai House-2 Bedroom Apartment with View &Terrace
Palaichori, Nicosia, i-Cyprus
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Stelios
U-Stelios unokuphawula okungu-20 kwezinye izindawo.
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Stelios izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Endaweni esemagqumeni edolobhaneni lase-Palaichori, ivalelwe i-Troodos Mountain, Ifulethi eliziphekelayo eline-balcony enefenisha nama-terrace agqunywe ngamatshe abheke idolobhana. Usayizi wendlu: 70
mű I-Wi-Fi yamahhala iyatholakala kuzo zonke izindawo.
Ifulethi elinamakamelo okulala amabili, elisendulini ne-veranda ebheke idolobhana nesigodi.
ngaphakathi kwendawo 70 mű + i-veranda emboziwe nethala ngaphambili nengadi.
-Ukungena kwangasese -Ikamelo 1: 1 umbhede olala umuntu oyedwa
-Ikamelo 2: 1 umbhede olala abantu ababili
-Ikamelo lokuphumula: umbhede owusofa ongu-2
-Uhlelo oluvulekile lwekhishi, elinendawo yokudlela kanye negumbi lokuphumula
le-Shower -WiFi, Umsakazo, i-TV ye-Flat-screen, I-ayina, Isiphephetha-moya, Ukushisisa, Imikhiqizo yokuhlanza, Izinto zokugeza zamahhala, Amathawula, Amashidi, Ifriji, Iketela likagesi, Izinto zasekhishini, Uhhavini, Umshini wokuthosa izitsha, izindawo zokudlela, kokubili ngaphakathi nangaphandle, (umshini wokuwasha awutholakali kuleli fulethi).
-WiFi yamahhala iyatholakala kuwo wonke amakamelo.
- Ukupaka kwamahhala nakho kuyatholakala.
Isikhungo sasemaphandleni sinikeza izindawo zokuheha eziseduze. Uhlangothi oluhle lwezwe ezintabeni ze-Troodos lulungele imisebenzi yangaphandle (ukuhamba, ukugijima, ukuhamba ngebhayisikili).
Ngohambo lwezinyawo olufushane ukusuka endlini, ungathola izindawo zokudlela zendabuko, amathilomu, amabhange nezimakethe ezincane.
Abaqashi bangavakashela isonto lase-Metamorfwagen Sotiros, Indawo Yamagugu Omhlaba ye-UNESCO, eyakhiwa ngekhulu le-16. ISonto litholakala esiqongweni samathafa alawula idolobhana futhi liyingqophamlando yamasiko nomlando.
Izindlela zama-natures nezindawo zokuzivakashela:
1. Indlela ye-Papoutsa yama-natures. Uhambo oluya e-Valley of Halkomata, lusiholela emagqumeni ase-Papoutsa lapho isivakashi singalandela khona uhambo lusiholela ekufihleni kwe-E.O.K.A e-Papoutsa, okuye kwabuyiselwa.
2. Isithombe Somama wase-Cypriot. Imisebenzi noma ubuciko benziwe ngo-1961 ukuhlonipha bonke abantu base-Cypriot abaye bazikhululela izingane zabo enkampanini yenkululeko yango-1955. Ukusuka egqumeni isivakashi singajabulela idolobhana lonke
3. I-Valley of Maroulena. ISonto lase-Saint Anagyron. Isonto lakhiwe endaweni ye- "Maroulena" ngaphandle kwedolobhana (1.5 km) lapho izindlu zakudala zazithandwa khona. Ngisho noma isonto lingenabo ubukhazikhazi bamanye amasonto aqhathanisayo edolobhaneni, isivakashi sizothola lapha izici ezimangalisayo zemidwebo yasodongeni kanye nezithonjana.
Khona-ke isihambi singahamba emgwaqeni ongcolile oxhumanisa isonto nedolobhana lase-Apliki (amakhilomitha angu-3) futhi ajabulele imithambeka ehamba phambili, lapho ukuphakama kufinyelela khona amamitha angu-1100. Uhambo lungase lube yinto eyingqayizivele kunazo zonke yokuthuthukiswa kwebhayisikili lasehlobo lasezintabeni kanye nokuqwala izintaba. Ukufika e-Apliki, umqwali wezintaba noma umgibeli wamabhayisikili angaphumula njengoba kukhona ingqalasizinda eyisisekelo yale njongo noma angaqhubeka nohambo lwakhe.
Cishe amakhilomitha angu- empumalanga ye-Apliki kukhona idamu le-Palaichori, elakhiwe emfuleni wase-Kampiou. Abangane bokudoba idamu liyithuba elihle lokuhileleka emidlalweni yabo. Echibini kunamathuba okuthi ingqalasizinda isungulwe ezokwenza ukwanda kweminye imisebenzi yezemidlalo njengokugitshelwa emikhunjini neminye.
4. I-Central Square. Isikhungo sasemaphandleni sinikeza izindawo zokuheha eziseduze. Isikwele esiyinhloko siyindawo yokuheha izivakashi, njengoba yakhiwa kabusha nge-pavers, inikeze uhlamvu oluhambisana nengqalasizinda ekhona (izitolo ezincane zekhofi, izindawo zokudlela) isivakashi esingazijabulela nganoma yisiphi isikhathi sosuku. Ukuhambahamba endaweni kungaholela isivakashi ezikhumbuzweni eziphawulekayo zomlando namasiko. 5.
Askas Traditional Village eduze ne-Palaichori. Umgwaqo osuka eNtshonalanga uholela ku- Askas, ngebanga elingamakhilomitha angaba ngu-2. Askas, yidolobhana elincane kodwa elibukekayo eliwina ngaphezu kwesivakashi nendawo yaso enhle kakhulu yemvelo ezungezwe izici ezijulile zobungcweti bokwakhiwa kwamasiko, okunikeza isithombe esiyingqayizivele.
6. Umzila we-Appis. Umzila ungamakhilomitha angu-6.5. Ubude besikhathi senkambo bungamahora angaba ngu-2.5 futhi wonke amamitha angu-800 umzila ophawuliwe. Kukhona nezindawo zokuphumula nokuvikelwa kwelanga nemvula ngamamitha angu-1464 nasekugcineni komzila. Ngasemzileni lapho, wonke amamitha angu-500, amabhentshi okuphumula nemigqomo yemfucuza.
Eceleni komzila kunezinhlobonhlobo zezitshalo, ezingu-30 zazo zifakwe emabhodini anesithombe negama. Izinyoni ezitholakala emzileni ngokuvamile ziyingxenye. Okungavamile okwenzekayo kuma-gums, i- mafropoulloi, imilingo.